College Essay amin'ny ||
Mila fanampiana amin'ny fanoratana matihanina? Makà taratasy avo lenta avy amin'ny Essay College tsara indrindra amin'ny || voasoratra amin'ny fenitra akademika rehetra.
Fomba entina manakarama mpanoratra an-tsekoly amin'ny oniversite tsara
Ianao ve mitady serivisy fanoratana lahatsoratra eny amin'ny oniversite tsara hanampiana anao amin'ny anjaranao amin'ny oniversite? Betsaka ny olona no mandiso ny fieritreretana fa ny fanoratana lahatsoratra dia zavatra iray mila atao irery. Na izany aza, ny tsy fahampian'ny fikarohana sy ny fiomanana no matetika mitondra amin'ny lahatsoratra ratsy.
Fa maninona no mila essayera eny amin'ny oniversite tsara? Betsaka amintsika no maniry hanoratra lahatsoratra avo lenta sy voasoratra tsara satria maneho ny haavon'ny fanabeazana sy ny faharanitan-tsika. Io antony io ihany no mahatonga ny ankamaroan'ny olona manakarama mpanoratra an-tsekoly. Na izany aza, inona marina no azon'ny mpanoratra mpanoratra am-pahaizana momba ny oniversite atao aminao?
Ny fironana handao ny tetikasa manandanja indrindra amin'ny minitra farany izay antony iray lehibe amin'ny tsy fahaizan'ny mpanoratra an-tsekoly. Rehefa tsapan'ny mpianatra fa kely sisa dia ho ela ny fe-potoana, dia manana safidy iray hafa izy ireo fa ny manakarama mpanoratra mpanoratra an-tsekoly.
Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia hanontany anao aloha ny mpanoratra hoe inona no tokony ho lohahevitr'ilay sanganasa amin'ny oniversite. Aorian'izany, matetika ny mpanoratra dia hanome anao hevitra momba ny fomba hiomanana. Mety hanome sosokevitra ny mpanoratra ny fanoratana zavatra tsy fantatrao momba azy. Amin'ity fomba ity dia hahafahanao mahazo fomba fijery sy fomba fijery vitsivitsy avy amin'ny mpanoratra.
Raha vantany vao manapa-kevitra ianao hoe inona ny lohahevitra ho tianao horesahina, dia hanome anao fotoana voafetra ny mpanoratra rehefa mila manomboka manoratra ianao. Hanampy anao tsy hanemotra fotoana iray amin'ny sanganasa izay mila asa bebe kokoa. Ny ankamaroan'ny mpanoratra dia manome ny mpanjifany drafitra ny lahatsoratra eny amin'ny oniversite izay hanampy azy ireo tsy hanao fanitsiana be dia be indray mandeha. Ny drafitra dia hanampy anao hifantoka amin'ny lahasa manokana iray ary hisorohana ny fikorontanana eo am-panaovana izany.
Matetika ny mpanoratra no tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny sangan'ny oniversite rehefa vita izany. Indraindray koa izy ireo dia handinika azy io ary hanao izay fanovana ilaina amin'izany. Io dia ahafahanao mifantoka amin'ireo tapany hafa amin'ny soratra fa tsy mila manitsy azy io tsy tapaka.
Sanganasa eny amin'ny oniversite maro no nosoratan'ny mpianatry ny oniversite. Izany no antony anoloran'ny mpanoratra maro ny tolotr'izy ireo hanampiana azy ireo amin'ny andraikiny any amin'ny oniversite. Amin'ny fanolorana azy ireo hanoratra ny diarinao eny amin'ny oniversite, dia tsy vitan'ny hoe manangona vola amin'ny fanoratana lahatsoratra ianao fa hahazo ny lahatsoratra farany tsara indrindra.
Na vao manomboka na manana traikefa an-taonany maro amin'ny fanoratana eny amin'ny oniversite ianao, dia afaka mandray soa betsaka amin'ny fampiasana mpanoratra mpanoratra siansa efa za-draharaha. Na dia mbola tsy nanoratra zavatra hafa aza ianao dia afaka mahazo tombony amin'ny serivisin'izy ireo satria misolo tena anao ny asan'izy ireo.
Ireo mpanoratra an-tsoratry ny anjerimanontolo matihanina dia afaka manome fanoratana tena tsara ho an'ny fampiharana any amin'ny oniversite sy ny asa soratra akademika. Matetika izy ireo dia manampahaizana manokana amin'ny fanoratana akademika, izay tokony hifantohanao. Zava-dehibe ny fisafidiananao mpanoratra iray izay azonao antoka fa fiaraha-miasa aminao.
Ny mpanoratra dia tokony hahatakatra ny tanjonao amin'ny fanoratana. Ohatra, raha tianao hampiaiky ny mpampiasa anao ny dianao, dia angamba antenain'izy ireo hiresaka amin'izy ireo ny atin'ny andranao. Ny atiny dia tokony ho tokana ary soratana miaraka amin'ny matihanina. Io dia hahafahan'ny essayeranao hisongadina amin'ireo mpangataka hafa ary hanome anao ny lohany amin'ny fifaninanana ataonao.
Rehefa mifidy ny mpanoratra dia tianao ho azo antoka fa mitady mpanoratra nanoratra ho an'ny hafa ianao. Amin'ity fomba ity, fantatrao fa hain'izy ireo ny fomba mivarotra am-pahombiazana ny tenany amin'ny olon-kafa. ary ho afaka hanoratra mahomby.
Na dia tsara kokoa aza ny tsy mamela ny tenanao handeha ho an'ny mpanoratra izay milaza fa afaka manoratra ny lahatsoratranao eny amin'ny oniversite ao anatin'ny iray andro, indraindray izy ireo dia afaka sy manao. Azo inoana fa te hiresaka amin'ny maro ianao alohan'ny hanapahanao hevitra ny amin'izay mety aminao. Mba hahazoana antoka fa manana mpanoratra mpanoratra za-draharaha ianao, dia tsara raha manadihady mpanoratra maro ianao ary mahazo ny valinteniny.